शहिद सप्ताहको अन्तिम दिन बिद्रोही नेकपाले देशभर के के गर्यो ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा — Sanchar Kendra
शहिद सप्ताहको अन्तिम दिन बिद्रोही नेकपाले देशभर के के गर्यो ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमाडाैं । बिद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशभर बिबिध कार्यक्रम गरी शहिद सप्ताह मनाएको छ । फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको शहिद सप्ताह बुधबार २१ सम्म नेकपाले विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाएको हो । सप्ताहको अन्तिम दिन बुधबार नेकपाले शहिद परिवारलाई सम्मान तथा अभिनन्दन गरेको छ ।
बुधबार नेकपाका काठमाडौं सेक्रेटरी पवनले सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मान गर्दै जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताहरुले धोका दिएका कारण सहिदका सपना अधुरै रहेको बताए । उनले एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत सहिदका अधुरा सपना पूरा पार्टीले नयाँ ढंगबाट संघर्ष सुरु गरेको बताए ।
सहिदहरुले बगाएको रगतले नेपालमा गणतन्त्र आएपनि परिवारले अपमानित हुनु परेको बताए । सहिदको रगतको भर्‍याङ बनाएर सत्तामा पुग्‍ने र सहिद परिवारलाई अपमान गर्ने प्रवृतिविरुद्ध आफूहरुले संघर्ष थालेको बताए ।
कार्यक्रममा सो पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हर्कबहादुर बिकले जनयुद्धमा बगेको रगतलाई नेताहरुले दुरुपयोग गरेको बताए । उनले सहिद तथा बेपत्ता परिवार अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले सहिदका सपना पूरा नगर्नेहरु धोकेबाज भएको समेत बताए । कार्यक्रममा सेक्रेटरी पवनले सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मानपत्रको साथै दोसल्ला ओडाएर सम्मान गरेका थिए ।
यस्तै उता स्याङ्जा जिल्लामा शहिद सप्ताहको अन्तिम दिन नेकपाले शहिद परिवार सङ्ग भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । माओवादी आन्दोलनको राम्रो प्रभाब रहेको भनेर चिनिने बायाखोलाको भुसाल थोकमा जिल्ला इन्चार्ज जेबि भण्डारि ‘आक्रोश’ र किसान सङ्गठनका ब्युरो सयोजक सागर अर्याल ‘बिपिन’ ले सामुहिक रुपमा भेटघाट गरेका छन् ।
त्यस्तै स्याङ्जाको भालुपहाडमा स्याङ्जाबाट महान जनयुद्धको क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरुको फोटो र सहिद पार्ककाे होडिङ समेत राखिएकाे छ । सोहि क्रममा जिल्ला इन्चार्ज आक्रोशले विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले शहिदको सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । अहिलेको सरकार काण्डै काण्डमा मुछिएर नाङ्गोभुतुङ्गो भइसकेको भन्दै अब देशको नेतृत्व विप्लवले नसम्हालेसम्म सर्वहारा बर्गले न्याय र मुक्ति पाउन नसक्ने ठोकुवा गरे ।